Mandoto ny tontolo iainana ny sigara ankoatry ny fahasimbana ara-pahasalamana | Fanavaozana maintso
Adriana | | Trano maintso
El setroka Fanao iray manimba ny fahasalamana izany nefa misy fiatraikany ratsy koa amin'ny tontolo iainana.
Mamokatra ny paraky fahalotoan'ny atmosfera, fandripahana ala, fiovan'ny toetr'andro, famokarana fako sy doro ala.
Ankehitriny any amin'ny ankamaroan'ny tanàna dia misy fameperana ny fifohana sigara amin'ny toerana mihidy ka mpifoka sigara no mivoaka any ivelany ary mamokatra famoahana entona ary loto maloto amin'ny atmosfera.
Isan-taona dia tombanana ho manodidina ny 4,5 tapitrisa tapitrisa ny bokotra na sigara vokarina eto an-tany. Ireny vody sigara ireny dia maharitra 25 taona vao simba ny tontolo iainana.
Ireo singa ilaina indrindra amin'ny sigara tara izy ireo ary ny nikôtinina dia mety handoto rano hatramin'ny 50 litatra ankoatry ny famonoana trondro, vorona ary biby izay mifandray amin'ity sisan-javatra ity.
Ho fanampin'izay, taratasy be dia be no ampiasaina hanamboarana sigara sy fonosana.
ny doro ala Matetika izy ireo dia novokarina tamin'ny ampahany lehibe tamin'ny butts novonoina kokoa. Fa manohana ihany koa fandripahana ala satria alaina alaina hamboly paraky noho ny filana lehibe an'ity vokatra ity eny an-tsena.
Ho famaranana, tsy vitan'ny manimba ny fahasalaman'ny mpifoka, ny olona manodidina azy io, fa miteraka na manamafy ny olan'ny tontolo iainana manerantany.
Ny fifohana sigara dia tsy fihetsika manokana tsy manan-tsiny izay misy fiantraikany amin'ny olona manao azy fotsiny, fa ny vokany eo amin'ny tontolo iainana dia mihalehibe ary miaraka amin'ireo olona maro izay manao izany dia efa misy olona an-tapitrisany mifoka isan'andro.
Raha liana amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana sy ny fiaraha-miasa amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana eto ambonin'ny planeta isika dia tokony hitsahatra tsy hifoka.
Ny indostrian'ny paraky dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra eto an-tany ary ireo manadino indrindra amin'ny toerana samihafa mba tsy hamerana ny fihinanana paraky, fa mahazo tombony amin'ny fahasalaman'ny olona izy ireo ary koa miharatsy ny olana eo amin'ny tontolo iainana.
Sarotra ny miala amin'ny sigara fa afaka manandrana manao izany ianao tsy ho an'ny fahasalamantsika sy ny kalitaon'ny fiainantsika ihany fa amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Mandoto ny tontolo iainana ny sigara ankoatry ny fahasimbana ara-pahasalamana
mandatsa-dranomaso dia hoy izy:
fanontaniana iray: vodin'ny sigara, rano firy litatra no mahavita mandoto azy?
Mamaly ny lasantsy
Mahatratra 50 litatra na mihoatra
teny ratsy mahatsiravina io.
Carmelo dia hoy izy:
Ary atelina ny kodiarana fikosoham-bary toy ity lahatsoratra ity Firy ny loto?
Valiny amin'i Carmelo
jeannise dia hoy izy:
Andriamanitra anie hamindra fo amin'ny zanak'olombelona! ny lehilahy mitovy manimba ny natiora
Valio i jeannise
Mahagaga ny isan'ny mpidoroka tsy manome olana momba ny tontolo iainako satria niova sy namboamboarina izy ireo, tsy miraharaha izy ireo raha manimba ny iray hafa raha miteraka setroka tontolo iainana, na inona na inona ary ratsy kokoa, raha tsy misy fampahalalana ny iray dia tsy miraharaha izy ireo ary manararaotra ny fandotoana ireo mpidoroka amin'ny poizina misy poizina tsy maintsy noraranao izy ireo
Izany rehetra izany dia ao amin'ny fahatsiarovan'ny olombelona rehetra… .. Fa mazava ho azy fa toy ny fiezahana hanome sakafo haingana. Ity dia zavatra izay na aiza na aiza ary manafika ny fahatsiarovan-tenan'ny olombelona.